Salaadda Saint Jude Thaddeus ee kiisaska aadka u adag oo quusta leh. ?
Ducada ilaa San Yahuza Tadeo kiisaska aadka u adag ee quusta leh Dhammaan codsiyada uu qofku yeelan karo, waxaa jira kiisas ka dhib badan kuwa kale. Kuwaas waxaa jira baryadaan xoogga leh.
Halkaan ma weydiisan kartid waxyaabo fudud ama wax aan qiimo lahayn, taasi waa, salaaddaan waxay gaar u tahay inaad weydiisato waxyaabo aan macquul aheyn sida bogsashada mucjisada ah, tusaale ahaan.
Xaaladaha caafimaadku waa kuwa ugu badan, si kastaba ha noqotee waxaad codsan kartaa wax kale.
Xaaladaha ay ka maqan yihiin shaqsiyaadka, carruurta ama dadka waaweyn, San Judas Tadeo waxaa laga codsanayaa inuu tuso dariiqa ay ugu laabanayaan dalkooda.
Waxa ugu weyni waa iimaanka lagu sameeyo.
Ka quusashada si aad u aragto mucjiso waa mid caadi ah, marar badanna waxaa jira xaalado u muuqda inaysan jirin meel looga baxo, laakiin xaaladahaas ducadu waxay noqon kartaa isha kaliya ee nabadda iyo aaminaadda.
1 U soo duceeynta Saint Judas Tadeo kiisaska aadka u adag ee quus ka taagan Yuu yahay?
2 U soo duceeynta St. Jude Thaddeus kiisaska aadka u adag iyo rajo la'aanta
3 Tukashadu ma awood badan tahay?
4 Goorma ayaan tukanayaa salaadda St. Jude Thaddeus?
U soo duceeynta Saint Judas Tadeo kiisaska aadka u adag ee quus ka taagan Yuu yahay?
Waxaa lagu yaqaanaa inaad tahay qofka saxda ah ee na caawiya kiisaska ay muuqato inaan xal loo helin. Wuxuu ku sheegay Injiillada Kitaabka Quduuska ah sida mid ka mid ah laba-iyo-tobankii xerta ahaa ee Ciise.
Isagoo ka mid ahaa laba-iyo-tobankii rasuul, wuxuu aad ugu dhowaaday Rabbiga xilligii uu dunida ku jiray qaab ahaantiisa.
Wuxuu had iyo jeer isku buuqsanaa Yuudas Iskariyod, kii ahaa kii Ciise siiyey Farrisiinta.
Yuudas Tadeo ma hayo macluumaad badan oo la taaban karo oo noo sheegaya halka ay ka timid, laakiin waxa la ogyahay waa awooddeeda siinta mucjisooyinka aan macquul ahayn.
Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay qofka ugu sharafta badan maanta, marka waa muhiim inaad waxbadan ka ogaato taariikhdiisa.
Awoodiisa mucjisada ahi waxay kujirtaa xaqiiqada ah inuu isagu yahay dhexdhexaadin noo dhaxeysa anaga iyo ciise, habkan waxaa la rumeysan yahay in codsiyada ay muhiimada koowaad siinayaan ka hor carshiga jannada waana sababtaas in si dhaqso leh looga jawaabo iyadoo aan loo eegeynin sida adag ama adagtahay mucjisooyinka la dalbaday. ee duco.
Oh rasuul sharafta badan St. Jude! Addoon aamin ah iyo saaxiibkii Ciise. Magaca khaa'inkii ku siiyay gacaliyahaaga gacmihiisa cadawga cadaawayaashiisa ayaa sababay in dad badani ku ilaaway. Laakiin kiniisaddu way ku sharfaysaa oo kuu martiqaadaysaa adduunka oo dhan adigoo ah daryeelaha dacwooyinka adag iyo quus.
U soo ducee inan aad u dhibtoonahay oo aan ka faa'ideysto, waxaan kaa baryayaa inaad mudnaanta qaaska ah ee laygu siiyay. Kaas oo lagu caawin karo si muuqata iyo si dhakhso leh markii ku dhawaad ​​rajada oo dhan lumay.
Kaalay oo i caawiya baahiyadan weyn.
Si aan u helo raaxada iyo kaalmada jannada xagga baahiyaheyga oo dhan, dhibaatooyinkeyga iyo dhibaatooyinkeyga, gaar ahaan (mid kasta oo ka mid ah ducooyinkaaga gaarka ah halkan ku samee) Iyo si uu Ilaah ugu barakeeyo adiga iyo dhammaan kuwa la doortay weligood.
Yuudas sharafta leh waxaan kuugu balan qaadayaa inaad marwalba xasuusato nimcadan weyn waligeyna joojin maayo sharaftaada inaad ii tahay ilaaliye qaas ah oo awood badan waxaanan sameeyaa waxkasta oo aan kari karo si aan u kobciyo cibaadadaada.
Cudurrada kama-dambaysta ah sida kansarka, shilalka naxdinta leh, dadka la waayey, afduubka, dhaca iyo dhammaan codsiyada loo arko inay adag yihiin kuwaa waa in wax looga qabtaa sheygan.
Waa inaad si gaar ah u weydiiso waxa aad rabto inaad ku hesho, waayo tan waa inaad si fiican u ogaataa kiiska, ma weydiisan karno qof inuu bogsado, waxaa fiican inaad awood u leedahay inaad si gaar ah u duceysato, adigoo adeegsanaya magaca qofka iyo magaca cudurka, tusaale ahaan .
Khabiir ku takhasusay sababaha lumay, xaaladahaas markay dadku iimaankoodii ka lumeen, halkaas oo rajo aysan jirin.
Kuwani waa daqiiqadaha marka awooda loo shaqeeyaha uu joogo. Khabiir ku takhasusay badbaadinta kartida aaminaada Saint ee inaga caawisa dayactirka iyo wadida iimaanka.
Tukashadu ma awood badan tahay?
Waxa u duceeya St. Jude Thaddeus kiisaska aadka u adag oo quusku waa mid awood leh waa caqiidada lagu sameeyo.
Ereyga Eebbe wuxuu ina barayaa in haddii aan weydiisano Aabaha inuu aamino inuu ina siin doono mucjisada.
Markaa waan fahmi karnaa inay tahay waxa kaliya ee looga baahan yahay jumladdu inay natiijo keento. In la weydiisto iimaan la'aan aan ku kalsoonaan karno fadliga Ilaah iyo gargaarka ayaa ah inaan waxla'aanno.
Ma weydiisan karno qof aanan rumeysneyn inuu na siiyo waxa aan weydiisanno. Waxa la weydiiyay oo dhan waa inay rumaystaan ​​qaybta ugu hooseysa ee qalbiga.
Iimaan dhab ah Ilaaha wax walba abuuray, wali awood buu u leeyahay inuu inaga caawiyo waxkasta oo aan ubaahanahay wuxuuna leeyahay quduusiintiisa inay ka caawiyaan sidii loo gaari lahaa, markaa ha ka labalabeyn inaad tukanto markasta oo aad u baahatid.
Goorma ayaan tukanayaa salaadda St. Jude Thaddeus?
Miyaad dooneysaa inaad ogaato goorta ay tahay inaad ducadan tukato?
Salaadda waad u tukan kartaa St. Jude Thaddeus kiisaska aadka u adag iyo quusashada markasta oo aad u baahatid.
Qoduuskan xoogga leh wuxuu maqlayaa codsiyadaada oo dhan, maxaa yeelay waa ku filan tahay inaad ku tukan karto rumaysad iyo aaminaad badan oo qalbigiisa ku jirta.
Waad tukan kartaa waana inaad tukan kartaa maalin kasta ka hor sariirta ama maalin kasta markaad toostid.
Hadaad waqti haysatid, waxaan kugula talineynaa inaad nal shumac cad uhesho San Judas Tadeo.